New Day Jobs | How to Succeed as an Entrpreneur, How to Choose Startup Vs. Corporate | Career Blogs
How to Succeed as an Entrpreneur, How to Choose Startup Vs. Corporate
Career Advice 25 Sep 2019
Ep. 1 and Ep.2of Career Marathon Series includes Ko Htet Arkar Soe discussing his career choices, including buildingastartup, and deciding betweenastartup vs.acorporate career. Myanmar transcript below.
မွနျမာနိုငျငံကလူငယျအမြားစုလိုပဲ မွနျမာမှာ ဆယျတနျးအောငျခဲ့တယျ။ ခတျေအရ ခတျေစားနတေဲ့ Tourism ကို Singapore မှာ သှားတတျရာကစပွီး တဈခွား နယျပယျတှေ အလုပျတှဘေကျ ပွောငျးဖွဈပုံကို ကိုထကျအာကာစိုးက အခုလိုပွောကွားပါတယျ။
“အဈကိုတို့ ဆယျတနျးအောငျတဲ့ အခြိနျမှာ ခတျေစားနတောကတော့ Tourism ပေါ့။ အဲ့တော့ အဈကို Tourism Diploma ကို Singapore မှာသှားတတျတယျ။ တဈနှဈတကျပွီးတော့ တဖွညျးဖွညျးသိလာတာကတော့ ငါ Business ပိုငျးသှားခငျြတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အဲ့အခြိနျမှာ အဈကို စကားပွောရတာကိုမကွိုကျဘူး။ တဈယောကျထဲ နရေတာကို ပိုသဘောကတြယျ။ Accounting ဆိုရငျ အနညျးဆုံးတော့ လူတှနေဲ့ သိပျပွီး စကားပွောစရာမလိုဘုးဆိုပွီးတော့ PSB academy မှာ BCom Accounting နဲ့ သှားတကျတယျ။ ကြောငျးပွီးသှားတဲ့ အခြိနျကတြော့ အဈကို့ရဲ့ Personality က တျောတျောပွောငျးသှားပွီ လုတှနေဲ့ စကားပွောရတာလဲကွိုကျသှားပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ Volunteer တှေ ဝငျလုပျကြောငျးသားအဖှဲ့အစညျးတှမှောဝငျပါပွီး ပှဲတှလေုပျဘာညာနဲ့ပေါ့။
ကြောငျးပွီးတော့အဈကို အလုပျလြှောကျဖို့ လုပျနတေဲ့ အခြိနျမှာ ကြောငျးကနပွေီးတော့ Management trainee အနနေဲ့ လုပျခငျြလားဆိုပွီးတော့ ငါ Accounting နဲ့ ဘှဲ့ရလာတာပေါ့ ဘှဲ့တဈခုလုံး Accounting နဲ့ လလေ့ာပွီးတော့ Accounting နဲ့ မလုပျရတည အရမျး နှမွောတာပေါ့နျော။ သခြောစဉျးစားပွီးတော့ Management trainee လုပျလိုကျမယျဆိုပွီးတော့ Management trainee အနနေဲ့ Department သုံ:ခုမှာ နှဈလတဈခါလောကျ ပွောငျးလုပျရတယျ။ ပွီးတော့ အဲ့မှာ အဈကို South East Asia region ရယျ Korea ရယျရဲ့ Country manager ကို Support လုပျရတယျ။ အဲ့အဈမ ထှကျသှားတော့ အဈကို့ကို Laosရယျ Myanmar ရယျ Cambodia ရဲ့ Country manager အနနေဲ့ တာဝနျယူခိုငျးတယျ။
နဲနဲကွာလာတော့ ဟိုဘကျမှာ အလုပျထှကျပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံပွနျလာတယျ။ ပွီးတော့ company ထောငျတယျ။ လေးငါးနှဈနတေော့ မဟုတျသေးဘူး ဒီတိုငျးဆကျသှားရငျ အဆငျမပွဘေူးဆိုပွီးတော့ Company ကနေ အဈကိုထှကျလိုကျတယျ။ထှကျပွီးတော့ Phandeeyar မှာ Entrepreneurship Program manager အနနေဲ့ ဝငျတယျ။ အဈကို Founder institute တို့ Startup challenge တို့ကို Run ခဲ့တယျ။ Phandeeyar မှာပဲ အဈကို Senior Accelerator Manager ဖွဈသှားတယျ။ အဲ့မှာAccelerator program ကို ကိုငျရတယျ။အခုနောကျပိုငျးကတြော့ ငါစီးပှားရေး ပွနျလုပျခငျြတယျပေါ့နျော Team ကောငျးကောငျးလဲရှိတယျ။ Business idea လဲရှိတာနဲ့ အလုပျထှကျပွီးတော့ အဈကိုတို့ Mitetal.com ကို လုပျနကေတြယျပေါ့နျော။"
Newday.jobs ရဲ့ Career Marathon Series ဟာ အောငျမွငျတဲ့ Career Progress ရှိထားတဲ့ Experts တှဆေီက အကွံတှေ သငျခနျးစာတှကေို မွနျမာ Young professional တှေ အတှကျ တငျဆကျပေးနတောဖွဈပါတယျ။ Ko Htet Arkar Soe ရဲ့ Career Path ပျေါ မူတညျပွီး Career Progress မွနျမွနျတကျအောငျ လုပျသငျ့တဲ့ Tips တှကေို အခုလို မေးမွနျးတငျပွလိုကျပါတယျ။
မေး : ဘာလို့ professional jump လုပျခဲ့တာလဲ?
ဖွေ : "ဘာလို့ Career Change တာလဲ ဆိုလို့ ရှိရငျ Digital ခတျေဖွဈတဲ့အ လြောကျ အ ပွောငျးအလဲက အရမျးမြားတယျ ကိုယျအ တှအေ့ကွုံ မြားလာတာနဲ့ အမြှ စဉျးစားတဲ့ ပုံလညျးပွောငျးလာတယျ နောကျပွီးက တော့ အကို Change တဲ့ အခြိနျတိုငျး အကို အဲ့ အခြိနျမှာ ဘာစိတျဝငျစားလဲပေါ့နျော အဲ့အ ပျေါမူတညျပွီး Change လုပျတယျ အဲ့တော့ အကို change တဲ့အခါမှာ ဘယျလို စဉျးစားလဲ ဆိုလို့ရှိရငျ အဲ့အခြိနျပျေါမှာ အကို ဘာလုပျခငျြတာလဲ ဒီက နပွေီးတော့ နောကျတဆငျ့ တကျဖို့ဆိုရငျ ဘယျလို ပညာရပျတှေ ဘယျလို အတှအေ့ကွုံ လိုလဲပျေါမူတညျပွီး အကို ရှေးခယျြတယျ"
မေး : လုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ တိုးတကျဖို့ဆို ဘာတှလေိုအပျလဲ?
ဖွေ : "အဈကိုမွငျတာကတော့ ကိုယျတိုးတကျဖို့အတှကျဆိုရငျ ကိုယျ့လုပျငနျးတိုးတကျဖို့က အရမျးအရေးကွီးတယျပေါ့။ အမွဲတမျးအဈကိုလုပျလရှေိ့တာကတော့ Companyရဲ့ mission၊ visionကို နားလညျအောငျအရငျလုပျတယျ။ ပွီးရငျ အဈကိုအရေးကွီးတျာလို့မွငျတာ (၃)ခကျြရှိတယျ။
ပထမတဈခကျြကတော့ ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျပျေါမှာ Ownershipယူတာ၊ ပိုငျရှငျ Mindset လိုမြိုးရှိဖို့လိုတယျ။ အဈကိုတို့အနနေဲ့ Company တဈခုမှာ အလုပျလုပျတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့Companyလို့ သဘောထားလိုကျပွီဆိုရငျ ကိုယျ့အနနေဲ့ ဘယျလိုမြိုးပိုကောငျးအောငျလုပျမလဲ။ ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျတငျမကဘူး Processပျေါမှာ ဘယျလိုမြိုး Contribute လုပျလို့ရမလဲ၊ ပိုမွနျအောငျဘယျလိုလုပျလို့ရမလဲ၊ ဒီ Process ကို ပိုကောငျးအောငျ ဘယျလိုလုပျလို့ရမလဲဆိုတာ အမွဲစဉျးစားဖွဈတယျပေါ့နျော။ စဉျးစားတာနဲ့မပွီးသှားဘူးပေါ့ အမွဲတမျးဒီProcess ကို ဒီအလုပျကို ပိုကောငျးအောငျကွိုးစားနတောပေါ့။ တကယျလို့ ကိုယျ့မှာ Idea တှရှေိတယျဆိုရငျလဲ ကိုယျ့ရဲ့ Reporting officer နဲ့ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ တိုငျပငျပွီး Company-wide implement လုပျလို့ရအောငျ ဆှေးနှေးလရှေိ့တယျပေါ့
နောကျတဈခုကကတြော့ Responsibilityပေါ့ ကိုယျလုပျတဲ့ အလုပျပျေါမှာ မှားမှားမှနျမှနျတာဝနျယူရဲတာမြိူးပေါ့။ အဈကိုတို့ဆိုလဲမှားခဲ့တာတှအေမြားကွီးပဲ။ လူတိုငျးလဲမှားတာပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူရယျလို့ဖွဈလာရငျ အမှားနဲ့မကငျးဘူးလေ။ မှားတာက ပွဿနာမဟုတျဘူး။ အဓိကအရေးကွီးတာက မှားလို့ရှိရငျ ကိုယျလုပျတာမှားသှားတယျဆိုတာကို တာဝနျယူရဲဖို့ဖွဈတယျ။ ပွီးရငျ ဒီအမှားပျေါမှာအမွဲလလေ့ာနပွေီးတော့ ထပျတူညီတဲ့ အမှားမြိုးမမှားပဲ ပိုပွီးကောငျးအောငျပဲလုပျဖို့အရေးကွီးတယျ။
နောကျဆုံးအခကျြအနနေဲ့ အရေးကွီးတာကတော့ Passion ပေါ့နျော။ ကိုယျလုပျနတေဲ့ အလုပျကိုခဈြဖို့ အရေးကွီးတယျလို့ ကြှနျတျောမွငျတယျ။အဈကိုအမွဲတမျး ကိုယျ့ကို ဆနျးစဈလရှေိ့တယျ။ ငါဒီအလုပျမှာ လုပျရတာပြျောရဲ့လား။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပြျောမှလဲ ခုနက ရှနှေ့ဈခုဖွဈတဲ့ Ownershipယူတာရယျ Responsibility ယူတာရယျ လုပျနိုငျမှာ။ အဲ့တော့ အဈကို မပြျောတော့ဘူးဆိုရငျလညျး အဈကို့အနနေဲ့ Career ခြိနျးသငျ့ပွီလား အမွဲစဉျးစားလရှေိ့တယျ။ "
မေး : အလုပျတဈခုကနေ အခြိနျတိုတှငျး အတှအေ့ကွုံ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝရအောငျ ဘယျလိုလုပျသငျ့လဲ?
ဖွေ : "အလုပျလုပျတဲ့ နရောမှာ အတှအေ့ကွုံအပွညျ့အဝ လိုခငျြတယျဆိုရငျ ကြှနျတျောယုံကွညျတာကတော့ အလုပျလုပျနရေငျး ကိုယျ့အထကျလူကွီး ဒါမှမဟုတျရငျ ကိုယျ့လုပျဖညျေကိုငျဖကျတှကေ ကိုယျမလုပျဖူးတဲ့ အရာတှေ ကိုယျလုပျနိုငျပမလားလို့ Doubt ဖွဈတဲ့ အရာတှကေို လှဲပေးလာတဲ့ အခြိနျတှရှေိလိမျ့မယျ။ အဲ့မှာတဈခြို့တှေ အနနေဲ့ ဖွဈတတျတာက မလုပျဖူးတဲ့ အတှကျ မှားသှားလို့ရှိရငျ ဘယျလိုဖွဈမလဲဆိုတာ စိတျပူပွီးတော့ ဒီတာဝနျတှကေို ရှောငျဖို့အတှကျ ကွိုးစားလရှေိ့ကွတယျ။ ဒါပမယျ့ အဲ့လိုလုပျမဲ့အစား ကိုယျမလုပျဖုးပမေယျ့ ဖွဈအောငျလုပျမယျ မသိရငျ သိတဲ့သူတှကေို မေးမယျဆိုပွီးတော့ ဒီတာဝနျတှကေို ယူမယျဆိုလို့ရှိရငျ ဘယျလာကျပဲ အခြိနျတိုတို လုပျပေါ့ ကိုယျမလုပျဖူးတာတှေ လုပျရငျး ယုံကွဘျခကျြပိုရှိလာသလို အတှအေ့ကွုံလညျးပိုတိုးလာမယျလို့ အဈကိုယုံတယျ"
မေး :အလုပျတဈခုကနတေဈခုပွောငျးရငျ အရေးကွီးဆုံး Transferable skill တှကေ ဘာဖွဈမလဲ?
ဖွေ : "အလုပျတဈခုနဲ့ တဈခုပွောငျးပွီဆိုရငျ transferable ဖွဈတဲ့ Skills တှကေ အမြားကွီးပဲပေါ့။ အဲ့ထဲကမှ အရေးကွီးဆုံး ဖွဈတာတှပွေောပါဆိုရငျ အခုခတျေက Digital ခတျေဖွဈတဲ့အလြောကျ Digital tools တှပေို သုံးတတျဖို့ကတော့ ဘယျအလုပျမှာဖွဈဖွဈလိုအပျတယျ။ ဥပမာ Social media သုံးတာ ပွီးရငျ Office suite တှသေုံးတာ စတဲ့ Digital skills တှလေိုတာပေါ့။
နောကျတဈခုအနနေဲ့ဆို Communication skill တြှ အရေးကွီးတယျ။ Communication skill တှကေ ဘာလို့ အရေးကွီးတာလဲဆိုရငျ အလုပျလုပျပွီဆိုရငျ အမွဲတမျး ကိုယျ့ Team နဲ့ ဒါမှမဟုတျ အခွားTeam နဲ့ Company အတှငျးမှာ ဒါမှမဟုတျ အခွား Company နဲ့ Collaborate လုပျရတာတှေ အမြားကွီးရှိတာကိုး။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျပွောခငျြတဲ့ Message ကို တဈဖကျလူပ clear ဖွဈဖွဈနဲ့ နားလညျအောငျ Communication skillက အရမျး အရေးပါတယျ။ Communication လို့ပွောတဲ့နရောမှာ language skill တဈခုထဲမဟုတျဘူးပေါ့နျော၊ ဘာသာစကားကို ဘယျလောကျပဲ ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြပွောနိုငျပါစေ တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျနားလညိအောငျ ပွောတဲ့အခါကွတော့ language ထကျအမြားကွီးပိုလိုပါတယျ။ အဈကိုမွငျတာတော့ အဲ့နှဈခုက အရေးအကွီးဆုံးလို့မွငျတယျ၊"
Career Marathon Series ရဲ့ အပိုငျးသဈတှကေို အပတျတိုငျး တငျဆကျပေးမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးဗြ။
မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်အများစုလိုပဲ မြန်မာမှာ ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တယ်။ ခေတ်အရ ခေတ်စားနေတဲ့ Tourism ကို Singapore မှာ သွားတတ်ရာကစပြီး တစ်ခြား နယ်ပယ်တွေ အလုပ်တွေဘက် ပြောင်းဖြစ်ပုံကို ကိုထက်အာကာစိုးက အခုလိုပြောကြားပါတယ်။
“အစ်ကိုတို့ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ အချိန်မှာ ခေတ်စားနေတာကတော့ Tourism ပေါ့။ အဲ့တော့ အစ်ကို Tourism Diploma ကို Singapore မှာသွားတတ်တယ်။ တစ်နှစ်တက်ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းသိလာတာကတော့ ငါ Business ပိုင်းသွားချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့အချိန်မှာ အစ်ကို စကားပြောရတာကိုမကြိုက်ဘူး။ တစ်ယောက်ထဲ နေရတာကို ပိုသဘောကျတယ်။ Accounting ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ လူတွေနဲ့ သိပ်ပြီး စကားပြောစရာမလိုဘုးဆိုပြီးတော့ PSB academy မှာ BCom Accounting နဲ့ သွားတက်တယ်။ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ အချိန်ကျတော့ အစ်ကို့ရဲ့ Personality က တော်တော်ပြောင်းသွားပြီ လုတွေနဲ့ စကားပြောရတာလဲကြိုက်သွားပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Volunteer တွေ ဝင်လုပ်ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဝင်ပါပြီး ပွဲတွေလုပ်ဘာညာနဲ့ပေါ့။
ကျောင်းပြီးတော့အစ်ကို အလုပ်လျှောက်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းကနေပြီးတော့ Management trainee အနေနဲ့ လုပ်ချင်လားဆိုပြီးတော့ ငါ Accounting နဲ့ ဘွဲ့ရလာတာပေါ့ ဘွဲ့တစ်ခုလုံး Accounting နဲ့ လေ့လာပြီးတော့ Accounting နဲ့ မလုပ်ရတည အရမ်း နှမြောတာပေါ့နော်။ သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ Management trainee လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ Management trainee အနေနဲ့ Department သုံ:ခုမှာ နှစ်လတစ်ခါလောက် ပြောင်းလုပ်ရတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့မှာ အစ်ကို South East Asia region ရယ် Korea ရယ်ရဲ့ Country manager ကို Support လုပ်ရတယ်။ အဲ့အစ်မ ထွက်သွားတော့ အစ်ကို့ကို Laosရယ် Myanmar ရယ် Cambodia ရဲ့ Country manager အနေနဲ့ တာဝန်ယူခိုင်းတယ်။
နဲနဲကြာလာတော့ ဟိုဘက်မှာ အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာတယ်။ ပြီးတော့ company ထောင်တယ်။ လေးငါးနှစ်နေတော့ မဟုတ်သေးဘူး ဒီတိုင်းဆက်သွားရင် အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ Company ကနေ အစ်ကိုထွက်လိုက်တယ်။ထွက်ပြီးတော့ Phandeeyar မှာ Entrepreneurship Program manager အနေနဲ့ ဝင်တယ်။ အစ်ကို Founder institute တို့ Startup challenge တို့ကို Run ခဲ့တယ်။ Phandeeyar မှာပဲ အစ်ကို Senior Accelerator Manager ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့မှာAccelerator program ကို ကိုင်ရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ငါစီးပွားရေး ပြန်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် Team ကောင်းကောင်းလဲရှိတယ်။ Business idea လဲရှိတာနဲ့ အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ အစ်ကိုတို့ Mitetal.com ကို လုပ်နေကျတယ်ပေါ့နော်။"
Newday.jobs ရဲ့ Career Marathon Series ဟာ အောင်မြင်တဲ့ Career Progress ရှိထားတဲ့ Experts တွေဆီက အကြံတွေ သင်ခန်းစာတွေကို မြန်မာ Young professional တွေ အတွက် တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Ko Htet Arkar Soe ရဲ့ Career Path ပေါ် မူတည်ပြီး Career Progress မြန်မြန်တက်အောင် လုပ်သင့်တဲ့ Tips တွေကို အခုလို မေးမြန်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေး : ဘာလို့ professional jump လုပ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ : "ဘာလို့ Career Change တာလဲ ဆိုလို့ ရှိရင် Digital ခေတ်ဖြစ်တဲ့အ လျောက် အ ပြောင်းအလဲက အရမ်းများတယ် ကိုယ်အ တွေ့အကြုံ များလာတာနဲ့ အမျှ စဉ်းစားတဲ့ ပုံလည်းပြောင်းလာတယ် နောက်ပြီးက တော့ အကို Change တဲ့ အချိန်တိုင်း အကို အဲ့ အချိန်မှာ ဘာစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့နော် အဲ့အ ပေါ်မူတည်ပြီး Change လုပ်တယ် အဲ့တော့ အကို change တဲ့အခါမှာ ဘယ်လို စဉ်းစားလဲ ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့အချိန်ပေါ်မှာ အကို ဘာလုပ်ချင်တာလဲ ဒီက နေပြီးတော့ နောက်တဆင့် တက်ဖို့ဆိုရင် ဘယ်လို ပညာရပ်တွေ ဘယ်လို အတွေ့အကြုံ လိုလဲပေါ်မူတည်ပြီး အကို ရွေးချယ်တယ်"
မေး : လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ တိုးတက်ဖို့ဆို ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
ဖြေ : "အစ်ကိုမြင်တာကတော့ ကိုယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ အမြဲတမ်းအစ်ကိုလုပ်လေ့ရှိတာကတော့ Companyရဲ့ mission၊ visionကို နားလည်အောင်အရင်လုပ်တယ်။ ပြီးရင် အစ်ကိုအရေးကြီးတ်ာလို့မြင်တာ (၃)ချက်ရှိတယ်။
ပထမတစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ Ownershipယူတာ၊ ပိုင်ရှင် Mindset လိုမျိုးရှိဖို့လိုတယ်။ အစ်ကိုတို့အနေနဲ့ Company တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်Companyလို့ သဘောထားလိုက်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တင်မကဘူး Processပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး Contribute လုပ်လို့ရမလဲ၊ ပိုမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ၊ ဒီ Process ကို ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ စဉ်းစားတာနဲ့မပြီးသွားဘူးပေါ့ အမြဲတမ်းဒီProcess ကို ဒီအလုပ်ကို ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတာပေါ့။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ Idea တွေရှိတယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်ရဲ့ Reporting officer နဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး Company-wide implement လုပ်လို့ရအောင် ဆွေးနွေးလေ့ရှိတယ်ပေါ့
နောက်တစ်ခုကကျတော့ Responsibilityပေါ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ပေါ်မှာ မှားမှားမှန်မှန်တာဝန်ယူရဲတာမျိူးပေါ့။ အစ်ကိုတို့ဆိုလဲမှားခဲ့တာတွေအများကြီးပဲ။ လူတိုင်းလဲမှားတာပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အမှားနဲ့မကင်းဘူးလေ။ မှားတာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ အဓိကအရေးကြီးတာက မှားလို့ရှိရင် ကိုယ်လုပ်တာမှားသွားတယ်ဆိုတာကို တာဝန်ယူရဲဖို့ဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် ဒီအမှားပေါ်မှာအမြဲလေ့လာနေပြီးတော့ ထပ်တူညီတဲ့ အမှားမျိုးမမှားပဲ ပိုပြီးကောင်းအောင်ပဲလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ အရေးကြီးတာကတော့ Passion ပေါ့နော်။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကိုချစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။အစ်ကိုအမြဲတမ်း ကိုယ့်ကို ဆန်းစစ်လေ့ရှိတယ်။ ငါဒီအလုပ်မှာ လုပ်ရတာပျော်ရဲ့လား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပျော်မှလဲ ခုနက ရှေ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ownershipယူတာရယ် Responsibility ယူတာရယ် လုပ်နိုင်မှာ။ အဲ့တော့ အစ်ကို မပျော်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း အစ်ကို့အနေနဲ့ Career ချိန်းသင့်ပြီလား အမြဲစဉ်းစားလေ့ရှိတယ်။ "
မေး : အလုပ်တစ်ခုကနေ အချိန်တိုတွင်း အတွေ့အကြုံ ပြည့်ပြည့်ဝဝရအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ?
ဖြေ : "အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ အလုပ်လုပ်နေရင်း ကိုယ့်အထက်လူကြီး ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ့်လုပ်ဖေည်ကိုင်ဖက်တွေက ကိုယ်မလုပ်ဖူးတဲ့ အရာတွေ ကိုယ်လုပ်နိုင်ပမလားလို့ Doubt ဖြစ်တဲ့ အရာတွေကို လွှဲပေးလာတဲ့ အချိန်တွေရှိလိမ့်မယ်။ အဲ့မှာတစ်ချို့တွေ အနေနဲ့ ဖြစ်တတ်တာက မလုပ်ဖူးတဲ့ အတွက် မှားသွားလို့ရှိရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ပူပြီးတော့ ဒီတာဝန်တွေကို ရှောင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားလေ့ရှိကြတယ်။ ဒါပမယ့် အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစား ကိုယ်မလုပ်ဖုးပေမယ့် ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် မသိရင် သိတဲ့သူတွေကို မေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီတာဝန်တွေကို ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လာက်ပဲ အချိန်တိုတို လုပ်ပေါ့ ကိုယ်မလုပ်ဖူးတာတွေ လုပ်ရင်း ယုံကြဘ်ချက်ပိုရှိလာသလို အတွေ့အကြုံလည်းပိုတိုးလာမယ်လို့ အစ်ကိုယုံတယ်"
မေး :အလုပ်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းရင် အရေးကြီးဆုံး Transferable skill တွေက ဘာဖြစ်မလဲ?
ဖြေ : "အလုပ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုပြောင်းပြီဆိုရင် transferable ဖြစ်တဲ့ Skills တွေက အများကြီးပဲပေါ့။ အဲ့ထဲကမှ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တာတွေပြောပါဆိုရင် အခုခေတ်က Digital ခေတ်ဖြစ်တဲ့အလျောက် Digital tools တွေပို သုံးတတ်ဖို့ကတော့ ဘယ်အလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ဥပမာ Social media သုံးတာ ပြီးရင် Office suite တွေသုံးတာ စတဲ့ Digital skills တွေလိုတာပေါ့။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆို Communication skillျတွ အရေးကြီးတယ်။ Communication skill တွေက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲဆိုရင် အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင် အမြဲတမ်း ကိုယ့် Team နဲ့ ဒါမှမဟုတ် အခြားTeam နဲ့ Company အတွင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် အခြား Company နဲ့ Collaborate လုပ်ရတာတွေ အများကြီးရှိတာကိုး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ Message ကို တစ်ဖက်လူပ clear ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ နားလည်အောင် Communication skillက အရမ်း အရေးပါတယ်။ Communication လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ language skill တစ်ခုထဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်၊ ဘာသာစကားကို ဘယ်လောက်ပဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်ပါစေ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်နားလညိအောင် ပြောတဲ့အခါကြတော့ language ထက်အများကြီးပိုလိုပါတယ်။ အစ်ကိုမြင်တာတော့ အဲ့နှစ်ခုက အရေးအကြီးဆုံးလို့မြင်တယ်၊"
Career Marathon Series ရဲ့ အပိုင်းသစ်တွေကို အပတ်တိုင်း တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးဗျ။